दिउसो छिटो चल्ने ईन्टरनेट राती किन ढिलो चल्छ ? – Online Nuwakot
गृहपृष्ठ ∕ बिबिध ∕ दिउसो छिटो चल्ने ईन्टरनेट राती किन ढिलो चल्छ ?
दिउसो छिटो चल्ने ईन्टरनेट राती किन ढिलो चल्छ ?
अनलाइन नुवाकोट माघ २९ २०७७, बिहीबार १५:३५
इन्टरनेटमा जटिल किसिमको कुनै प्राविधिक समस्या आउँदा प्रायः सबैजसो सेवा प्रदायकले सम्झिने नाम हो समित जन । प्राविधिक अनुभवले खारिएका समितलाई धेरैले नेपाली इन्टरनेटका डाक्टर नै मान्छन् ।उनी नेपाल इन्टरनेट एक्सचेञ्ज (एनपीआईएक्स) का बोर्ड सदस्य, एनआईटिभीका संस्थापक, जिनियस सिस्टमका सह–संस्थापक, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सल्लाहकार, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको छाता संगठन इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर्स एसोसिएसन अफ नेपाल(आइस्पान)का सदस्यका साथै इन्टरनेट सेवाप्रदायक वर्ल्डलिङ्कका प्रमुख प्राविधिक अधिकृत पनि हुन् ।
उनै समितसँग , बेलुका तथा बिहानको समयमा इन्टरनेट स्लो हुनुको कारण र त्यसको समाधान बारे संक्षिप्त रुपमा बुझ्ने प्रयास गरेको छ । जवाफ समितकै शब्दमा; धेरै प्रयोगकर्ताहरुले इन्टरनेट स्लो भएको गुनासो गरिरहनु भएको हुन्छ । स्पिड टेस्ट गर्दा पर्याप्त स्पिड देखिएन अथवा भनौं इन्टरनेट सेवाप्रदायकले भने जति ब्याण्डविथ आएन ।
यदि इन्टरनेट स्लो भइरहेको छ भने तपाईंले दुई ओटा कुराहरु हेर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो कुरा तपाईंले इन्टरनेटको स्पिड टेस्ट गरिरहँदा त्यही राउटरमा कतिवटा डिभाइसहरु कनेक्टेड छन् भन्ने कुरा हेर्न आवश्यक छ ।
अर्को भनेको चाहिँ वाईफाईको गुणस्तर हो । साधारणतयाः ल्यापटप वा मोबाइलमा वाईफाई कनेक्ट गर्दाखेरी त्यहाँ वाईफाईको संकेत देखाइरहेको हुन्छ ।
त्यहाँ रहेको चार वटा बारहरुमा सबै बारहरु राम्रोसँग देखिएको छ भने त्यो फुल सिग्नल भयो । तीन वटा छ भने कम भयो र दुई वटा छ भने त्यसभन्दा पनि कम भयो र एउटा मात्र छ भने त्यो निकै कमजोर भयो ।
यदि इन्टरनेट स्पिड भनेजति छैन र स्पिड टेस्ट गर्दा धेरै डिभाइसहरु कनेक्टेड छन् भने आफूले लिएको इन्टरनेट ब्याण्डविथ कत्तिको खपत भइरहेको छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा यदि पुगेको छैन भने प्याकेज अपग्रेड गर्नुपर्‍यो ।
तर यदि ब्याण्डविथ पनि पर्याप्त छ र कनेक्टेड डिभाइस पनि धेरै छन् भने चाहिँ त्यस्तो बेला राउटर नै अपग्रेड गर्नुपर्ने हुनसक्छ । धेरै डिभाइसहरु एउटै राउटरमा कनेक्ट हुँदा त्यसको पर्फर्मेन्समा समस्या देखिएको हुनसक्छ ।
त्यस्तोमा २.४ गिगाहर्ज राउटरलाई ५ गिगाहर्ज राउटरमा अपग्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को कुरा वाईफाईको सिग्नल तलमाथि भइरहेको छ वा राम्रोसँग आइरहेको छैन भने त्यो चाहिँ अत्यधिक इन्टरफ्रेन्स (फ्रिक्वेन्सी अवरोध) ले भएको हुनसक्छ । यसको समाधान पनि ५ गिगाहर्ज राउटर नै हो ।
तर यदि तपाईंसँग ५ गिगाहर्ज सपोर्ट छैन भने एउटै राउटरबाट धेरै कभरेज दिन खोज्नुभन्दा दुई राउटर टाढा राखेर पनि त्यस्तो समस्या केही हदसम्म कम गर्न सकिन्छ ।
धेरै ग्राहकहरुको गुनासो हुन्छ कि मैले सुरुमा इन्टरनेट राख्दा राम्रै हुन्थ्यो तर विस्तारै इन्टरनेट स्लो हुँदै गयो । यसमा मैले बुझेको कुरा के छ भने सुरुमा इन्टरनेट जोड्दा छरछिमेका त्यति धेरै इन्टरनेट प्रयोगकर्ता हुँदैनन् ।
वाईफाई सिग्नल पनि राम्रै हुन्छ । क्रमशः छिमेकीले पनि इन्टरनेट जोड्छ । घरको तल्लो तला वा माथिल्लो तलामा बस्नेले पनि इन्टरनेट राख्छ ।
यसरी छरछिमेकमा इन्टरनेट कनेक्सनको संख्या बढ्दै जान्छ । सबैले प्रयोग गर्ने २.४ गिगाहर्ज वाईफाई नै हो । त्यसले गर्दाखेरी न्वाइज (फ्रिक्वेन्सी आपसमा जुधेर अवरोध पैदा हुने अवस्था) बढी हुन्छ ।
सामन्यतया इन्टरनेटको पिक आवर बिहान र बेलुकाको समय हो । बाहानको करिब ७ बजेदेखि ९ बजेसम्मको अवधि र बेलुका ७ बजेदेखि ११ बजेसम्मको समयलाई इन्टरनेटमा पिक आवर मानिन्छ ।
इन्टरनेटको पिक आवर भनेको साधारणतया विद्युतको पिक आवर जत्तिकै हो । अर्को अर्थमा पिक आवर त्यो हो, जतिखेर इन्टरनेटको प्रयोग अत्यधिक हुन्छ ।
कुनै पनि इन्टरनेट सेवाप्रदायकले आफ्नो नेटवर्कको क्षमता यही पिक आवरको मागलाई धान्ने गरी डिजाइन गरेको हुन्छ । तर नेटवर्कमा कुनै समस्या आएको छ वा सेवाप्रदायकको आफ्नै साइडमा पनि ब्याण्डविथ पुगेको छैन भने प्रयोगकर्ताले इन्टरनेट स्लो भएको अनुभव गर्छन् ।
सामान्यतयाः पिक आवरमा इन्टरनेट स्लो हुनुको बढी जसो कारण चाहिँ प्रयोगकर्ताको साइडमा नै हुने गरेको देखिन्छ । दिउँसोको समयमा घरमा भएको राउटरमा कनेक्ट हुने डिभाइसको संख्या कम हुन्छ र इन्टरनेटको प्रयोग पनि कम भइरहेको हुन्छ ।
प्रयोगकर्ताको आफ्नो घरको राउटर मात्र नभएर छर छिमेकमा भएका राउटरमा कनेक्ट हुने डिभाइस पनि कम हुने र इन्टरनेटको प्रयोग पनि थोरै भइरहेको हुन्छ । तर पिक आवरको समयमा भने सबै घरको राउटरमा धेरै डिभाइसहरु कनेक्ट हुन पुग्छन् ।
यसले गर्दा हामीले प्रयोग गर्ने २.४ गिगाहर्जको वाईफाई राउटरमा न्वाइज (उपकरणहरुको भिडभाडबाट सिर्जना हुने फ्रिक्वेन्सी अवरोध) सिर्जना हुन पुग्छ । जति धेरै न्वाइज भयो, इन्टरनेटको गुणस्तर पनि त्यति नै धेरै कमजोर हुँदै जान्छ ।
साधारण उदाहरणको रुपमा भन्नुपर्दा एउटा हलमा जति धेरै मान्छे जम्मा भएर होहल्ला गर्छौं, त्यति नै एक अर्काको आवाज सुन्न मुस्किल हुन्छ । हो ठीक त्यसैगरी २.४ गिगाहर्ज राउटरमा खासगरी पिक आवरमा धेरै डिभाइस कनेक्ट हुने भएकाले न्वाइज पैदा गराउँछ ।
जसले गर्दा उक्त समयमा इन्टरनेटको गुणस्तर खस्किन पुग्छ । यसको समाधान भनेको चाहिँ सिंगल ब्याण्ड राउटरलाई डुअल ब्याण्ड राउटरमा लैजानु नै हो ।
किनभने सिंगल ब्याण्ड राउटरमा वाईफाईका लागि च्यानलहरु कम हुने भएकाल अवरोध बढी हुने गर्दछ । तर ५ गिगाहर्ज राउटरमा च्यानलहरु बढी हुने भएकाले फ्रिक्वेन्सी अवरोध हुने संभावना कम हुन्छ ।
यदि पिक आवरमा तपाईंको इन्टरनेट स्लो हुने समस्या छ र तपाईंको डिभाइसले सपोर्ट गर्छ भने ५ गिगाहर्जको राउटर राखेर यस किसिमको समस्याबाट पार पाउन सक्नुहुन्छ ।
ककनि गाउँपालिका बाट एमालेमा प्रवेश गर्नेको संख्या बढ्दाे